Posted on 10 / 26 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Ahaanshaha analog testosterone (halabuurkiisu wuxuu lamid yahay kan testosterone), Anavar wuxuu dhaqaajiyaa duubayaasha nukliyeerka qaaska ah wuxuuna ku xidhaa iyaga sida ay testosterone u sameyso oo kale. Taas awgeed, waxay faa'iido u yeelan kartaa daaweynta beddelka testosterone.
Oxandrolone (Anavar) budada (53-39-4) waa aamin oo ragga iyo dumarkuba way istcimaali karaan marka qiyaasta saxda ah loo hogaansamo. Si ka sii wanaagsan, waxyeellooyinkeeda suurtagalka ah badanaa waa kuwo fudud. Sidan oo kale, waa mid ka mid ah xalka loogu talagalay dadka qaba cudurka 'HIV-wasting syndrome' ama 'hypogonadism' ee ragga maxaa yeelay waxay hagaajineysaa sii-haynta nitrogen iyo sidoo kale murqaha dufanka aan lahayn.
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee anavar budada (oxandrolone).
Oxandrolone (Anavar) waxaa lagu sharaxay markii ugu horeysay sanadka 1964 Shaybaarada Searle (oo hadda ah shirkad hoosaad ka ah Pfizer). Shirkaddu sidoo kale waa soo saare dawooyin kale oo caan ah sida Celebrex, NutraSweet iyo Ambien. Waa ikhtiraac dadaallada iskaashiga ee Raphael Pappo iyo Christopher J. Jung.
Khubarada cilmi baarista ayaa la yaabay saameynta aadka u daciifka ah ee istrogenic ee Oxandrolone ee la xiriirta saameynta anabolic ee daroogada. Markii dambe, 1964, waxay soo bandhigeen daroogada a Daawooyinka dawooyinka loogu talagalay kor u qaadida muruqyada dadka ku dhaca miisaan lumis qasab iyo sidoo kale daaweynta HIV / AIDS.
Waqtigaas, dawada anabolic steroid waxaa lagu iibiyay magacyo kala duwan oo magac ah, oo ay ku jiraan Bilowgii Oxandrolone iyo Oxandrin, adduunka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, markii dambe ayaa lagu xoojiyay magaca hadda jira ee Mareykanka, Anavar.
Waqti la joogo, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) ayaa u ansixiyay Oxandrolone xaalada daroogada agoonta inay u noqoto daaweyn loogu talagalay Turner Syndrome, miisaanka oo uu sababo HIV iyo sidoo kale iyo miisaanka oo hoos u dhaca HIV.
Qiimaha 'oxandrolone' caadi ahaan wuu sarreeyaa. Marka, haddii aad la kulanto iibiye iibiya daroogada 'qiimo dhimis qoto dheer', raadi inaad ogaato haddii iibiyuhu shati haysto oo uu ku shaqeynayo si sharci ah si loo hubiyo inaadan ku dhicin alaab kootarabaan ah.
Anavar / Oxandrolone waa walax qaali ah oo soosaaristiisa, guud ahaanna waa talo xumo in laga iibsado ganacsade kasta oo ku bixinaya 'qiimo dhimis qoto dheer'. Waad iska hubin kartaa Dib u eegista Anavar si loo ogaado haddii iibiyeha uu ku shaqeynayo gudaha qaab dhismeedka sharciga iyo haddii alaabooyinkooda ay yihiin kuwo asal ah. Faallooyinka Anavar sidoo kale waxay ku siin karaan fikrado ku saabsan meelaha ugu wanaagsan ee lagu iibsado dawada.
Mareykanka dhexdiisa, Sharciga Maandooriyaha La Xakameeyay wuxuu u kala saaraa Oxandrolone / Anavar, iyo waxyaabo kale oo badan oo ka mid ah quudinta iyo istrogen-ka oo loo yaqaan 'Schedule III'. Taas macnaheedu waa in qofku ka helo dhakhtar shati haysta iyo farmashiye.
Boqortooyada Ingiriiska gudaheeda, Oxandrolone waa mid ka mid ah walxaha la kontoroolo ee loo qoondeeyay Jadwalka IV; dhammaan steroids dhiska waxay ka tirsan yihiin qaybtaan.
Si kastaba ha noqotee, sharciga istaraatiijiga ah ee Kanadiyaanka ayaa leh waaritaan qeexaya in qof dalka gudihiisa ah uusan iibsan karin daroogada illaa ay sharxaan sababta ay u doonayaan inay u iibsadaan. Iyadoo kuxiran sababta loo sheegay, iibiyaha ayaa aqbali kara ama diidi kara dalabka iibka. Isku day ah in la iibsado steroid waa in la raacayaa ugu yaraan 30 maalmood ka hor mid kale la sameeyo.
Meesha kaliya ee aad ka iibsan karto Anavar sharci iyo tayo sare leh waxay ka timid iibiyaha shati haysta oo sharciyeysan. Qoraalkaas, AASraw waa meesha ugu fiican ee laga helo alaabta.
AASraw wuxuu la macaamilaa iskudhaf ballaaran iyo wax soo saar Oxandrolone sidaas darteedna waxaan ku siin karnaa tiro kasta oo ah Anavar iibinta ama jooji isticmaalka inta aad buuxineyso shuruudaha lagama maarmaanka ah. Waxaan ku shaqeyneynaa CGMP iyo nidaamkeena xakamaynta tayada la socon karo ayaa naga caawinaya inaan ku shaqeyno xuduudaha sharciyada iyo xeerarka ku habboon si loo hubiyo inaan bixinno alaab heer sare ah.
John Cabaj, "Geeddi-socodka sameysmada oxandrolone." US Patent US20030032817, oo soo baxday Febraayo 13, 2003
Karim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., & Maibach, HI (1973). Dabeecadda Oxandrolone iyo dheef-shiid kiimikaadka ee ninka. Daaweynta Daaweynta Daaweynta & Daaweynta, 14 (5), 862-869.
Raiti, S., Trias, E., Levitsky, L., & Grossman, MS (1973). Oxandrolone iyo hoormoonka koritaanka aadanaha: isbarbardhigga saameynta kobcinta-kicinta ee carruurta gaagaaban. Joornaalka Mareykanka ee Cudurada Carruurta, 126 (5), 597-600.
Rosenbloom, AL, & Frias, JL (1973). Oxandrolone ee kor u qaadista koritaanka ee Turner syndrome. Joornaalka Mareykanka ee Cudurada Carruurta, 125 (3), 385-387.
Strauss, RH, Liggett, MT, & Lanese, RR (1985). Isticmaalka steroid-dhiska iyo saameynta la dareemo ee tobanka ciyaartoy ee miisaanka u tababaran. Jaamac, 253 (19), 2871-2873.
Tilmaamaha Iibsashada Dhamaystiran ee SARM SR9009 Jir-dhiska	Sidee Flibanserin U Caawisaa Haweeney Hormoonka Galmada